Faah faahin:- Qarax lagu soo xiray gaari uu watay nin ganacsade ah oo Muqdisho ka dhacay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax lagu soo xiray gaari uu watay nin ganacsade ah oo Muqdisho ka dhacay
Qarax aad u xoogan islamarkaana ahaa mid lagu soo xiray gaari uu watay nin la sheegay inuu ahaa ganacsade ayaa barqadii maanta ka dhacay buundada kala qeybisa degmooyinka Waaberi iyo X/jajab ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaan oo si weyn looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in lagu beegsaday nin lagu sheegay inuu ahaa ganacsade, xilli uu maraayay buundada kala qeybisa degmooyinka Waaberi iyo X/jajab ee magaalada Muqdisho.
Ninkaasi ganacsadaha ah oo magaciisa lagu soo koobay C/raxmaan Afleershe ayaa sida la sheegay ka mid ahaa ganacsatada ku sugan magalaada Muqdisho, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn sababta qaraxaasi loogu xiray gaarigiisa.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa islamarkiiba soo gaaray ciidamo ka tirsan nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo halkaasi ka bilaabay baaritaano ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen.
Illaa iyo haatn ma jirto cid kale oo qaraxaasi wax ku noqotay, marka laga reebo ninka qaraxa lala beegsaday oo isla goobta ku geeriyooday.
Xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana haatan goobtaasi ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, oo halkaasi baaritano ka sameeynaya.